KAOMININA BELOBAKA : Tsy manaiky ny fanesorana ny Pds ireo mpanolotsaina monisipaly
Mizara roa ny hevitry ny mpiasa ao amin’ity kaominina Belobaka ity. Voalohany tsy hihemotra amin’ny fitsipahana ny fanesorana ny Pds ao amin’ny kaominina Belobaka ireo mpanolotsaina monisipaly sy ny solontenan’ny vahoaka araka ny fanambaràn’izy ireo. 31 janvier 2018
Mandrahona ny hidina an-dalam-be izy ireo raha toa ka miziriziry amin’ny heviny ny fanjakana amin’ny fanesorana ny Pds, Razafindrakoto Maminiaina Yves. Niakatra any an-drenivohitra ireo mpanolotsaina ao amin’ny kaominina Belobaka hihaona amin’ny Praiminisitra amin’ity raharaha mampisavorovoro ny kaominina Belobaka ity. Tsiahivina moa fa herinandro vitsivitsy izay dia niparitaka ny karatany sandoka tao amin’ity kaominina ity. Niantso ny olona rehetra vao nahazo karatany mba hitondra izany eny amin’ny kaominina ny Pds mba hohamarinina. Tsy fantatra na misy ifandraisany amin’ny fanesorana ny Pds izany na tsia.
Mankasitraka ny fanesorana azy ireo mpiasa sasany
Manaraka izany, misy ny mpiasa milaza fa tireo mpanolotsaina kaominaly izay nigoka ny tombontsoa tamin’ilay filohan’ny delegasiona teo aloha izay tsy maintsy noesorina teo amin’ny toerany no hany sisa mangataka ny hamerenana azy, hoy kosa ireo mpiasa sasany mpanodina ny raharaha ao amin’ity kaominina Belobaka ao Mahajanga faharoa ity. Mankasitraka ny fanesorana ilay Pds teo aloha, izy ireo. Antony roa no nahavoasaringotra an’i Maminiaina Yves Obrie, ilay tompon-toerana teo aloha, dia ny hosoka sy ny halatra sonia ary ny amboletra teo amin’ny famoaham-bolan’ny kaominina araka ny nambaran’ireo mpiasa.
Ho an’ingahy Miamina Ghislin Freddy, izay voatendry hisolo azy eo amin’io toeran’ny filohan’ny delegasiona vaovao ao amin’ity kaominina ity kosa dia tsy manan-kalahatra ny momba io raharaha io izy fa ny naotin’ny minisiteran’ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ihany, hoy izy no tompon’ny teny farany ny nanendrena azy ho eo amin’io toerana io. Ka tsy tokony hitsabahan’ireo mpanolotsaina izany na koa ireo mpiandany tamin’io Pds teo aloha io. Tsy vao izao ny tenany no efa nitantana ny raharaham-panjakana fa efa teo ambany fahefan’ilay Pds teo aloha ka mahafantatra tsara ireo antsoina hoe "administration" na ny fitantanan-draharaham-panjakana, hoy ny fanazavany.
Ka nanaovany fanamby ny handrindrana izany tsara mitaha amin’ny teo aloha. Ho an’i Lanto, lehiben’ny mpiasan’ny kaominina Belobaka kosa dia nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny alatsinainy 29 janoary teo fa mizotra toy ny fanao andavanandro ny asan’izy ireo ary misokatra daholo tokoa ny birao misahana ny fikarakarana ireo antotan-taratasy ilain’ny rehetra eny amin’iny kaominina iny raha sendra teny ny tenanay.
Tratra niaraka tamin’ny basy sy odigasy i Alain, jiolahy raindahiny ANKAZOBE (656) 21 janvier 2021 Mila vola hatrany amin’ny 75,9 tapitrisa dolara KERE SY HAINTANY ANY ATSIMO (356) 19 janvier 2021 Nakorain’ireo mpijery ny Ben’ny tanànan’Antsiranana FANDRAVANA LALAO (158) 19 janvier 2021 Trano 50 tafo mahery kilan’ny afo HAIN-TRANO GOAVANA TENY ANOSIBE ANDREFANA (89) 19 janvier 2021 Namaly ny hetahetan’ireo voafonja ao Antsiranana DEPIOTE JOCELYNE MAXIME (76) 19 janvier 2021 Lehilahy 04 mpihaza sokatra an-dranomasina tratra NOSY ANTANIFALY - ANALALAVA (72) 19 janvier 2021